Iimpawu zeVirgo Man ziyakuthanda: Ukusuka kwiZenzo ukuya kwiNdlela ekuBhala ngayo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Iimpawu zeVirgo Man ziyakuthanda: Ukusuka kwiZenzo ukuya kwiNdlela ekuBhala ngayo
Iimpawu zeVirgo Man ziyakuthanda: Ukusuka kwiZenzo ukuya kwiNdlela ekuBhala ngayo
Indoda eyiVirgo iya kukuthanda ngeyona ndlela ibalaseleyo, ngokuzolileyo nangomonde, ngothando, nothando, kunye nothando olunokulingiswa nguye kuphela. Kodwa ngekhe uyazi ukuba uyakuwela, ubuncinci okwethutyana.
Iimpawu ezili-10 eziphezulu zeVirgo zikuwe
Ukubuza imibuzo emininzi ukukuqonda ngcono.
Ukhona xa ukufuna kakhulu.
Akachithi xesha kunye nezinto ezimnandi.
Iminqweno kukukunika lonke uyolo emhlabeni.
Uyakuvavanya ukuze ubone ukuba unyanisekile na.
Ubonisa icala lakhe elisesichengeni.
Uya kusebenzisa uthando olusisiseko, akukho nto.
Ugcina unxibelelwano lwamehlo kwinto evakalelwa ngayo njengobudala.
Uyonwaba xa ukho.
Unesitayile sokugcizelela nesithandekayo (jonga isimbo sokudlala ngothando).
Ngenxa yokuba ufuna ukuba nobudlelwane obuzinzileyo nobukhuselekileyo, ngekhe azigqithe ekuthandaneni, kwaye akazukujika ngokuzenzekelayo nangokungaqiniseki.
Ufuna ukwazi kakuhle ukuba wenza ntoni, kwaye uchitha nabani ixesha lakhe naye, kuba yeyona nto ibalulekileyo.
Ayisiyo ukwanga okomzuzwana, hayi ukubamba ngesandla, kwaye ngokuqinisekileyo ayizizo izithembiso ezingeyonyani zobomi bonke kunye. Kufuneka aqiniseke ukuba akangeni kwimeko ye-labyrinthine apho angayi kubalekela khona.
Ungazi njani ukuba iVirgo yakho iyakuthanda
Ayizizo zonke izinto ezigqibeleleyo, kwaye ukungafezeki kwalo mfana kunento yokwenza nendlela ajongana ngayo nezinto zakhe zothando, okanye ubuninzi babo.
Ngenxa yokuba akanamdla wokuzibandakanya nokuzenzekelayo okwethutyana, uyala ngokucacileyo amabhinqa amaninzi eza kuye efuna ulonwabo nolonwabo.
Endaweni yokuba, xa edibana nomntu kufanelekile, uqala ngothando, into engaqhelekanga ukuyenza.
Ngokunyaniseka nangokunyanisekileyo, akazukuchitha ixesha ngento angayinqweneliyo kwaphela, ukuze uqiniseke ukuba xa ethetha nawe kwaye ancume ngobuqhophololo, kukho into eqala ukudubula ngaphakathi entliziyweni yakhe.
Akayi kuchitha mzuzwana kunye nawe, kwaye uya kufuna ukukwazi ngeyona ndlela inzulu yelizwi, ukusuka ezinzwaneni ukuya kwiinwele zokugqibela emzimbeni wakho, ngokuthetha ngokwasemzimbeni.
Indoda yeVirgo iya kuziphatha njengayo nayiphi na enye xa isemathandweni, okanye ubuncinci abayimanga kakhulu xa kufikwa ekuthandeni umdla wabo wothando. Uya kubhenela kukuleqa okuqhelekileyo, achithe ixesha kunye nomnye umntu, kwaye abazise uthando lwabo nothando lwabo rhoqo.
Ukuba oko akuqhelekanga, kwaye kulungile, ke asazi ukuba yintoni. Kwakhona, lumkiswa ukuba uya kuzama ukukoyikisa ngeyona nto imbi kuye, ukuze abone ukuba uyakubakhona xa eyifuna kakhulu.
Ukuba ubunokuhamba xa imeko imbi kakhulu, iya kuba yeyona nto imbi kuye, kwaye ngokucacileyo ayinqweneleki.
Uya kuziva ngathi ilitye liphakanyiswa esifubeni sakhe xa ekunye nawe, ke kuyakucaca ukuba uziva mkhulu ebusweni bakho.
Nokuba ngumdla wokuqala, okanye uvakalelo olunzulu lothando, kulungile, nangona kunjalo, kuba yinto ebaluleke ngokwenene leyo, uyazi ukuba ukuwe okanye akunjalo.
Sonke siyazi ukuba ayisiyiyo eyona mvakalelo imnandi emhlabeni, ukudaka ukungaqiniseki, oko kukuthi, ke ngokufumanisa malunga neempawu zokuxela ukutyumka kwakho ukuthandana, yinto ekufanele uyiqwalasele kwaye uyayenza nayo.
I-Virgos yaziwa ngokulangazelela impumelelo ngaphezu kwayo yonke enye into, kwaye ithathela ingqalelo ukuba iyimiqondiso yomhlaba, efuna uzinzo, ukhuseleko lwezinto eziphathekayo, ubomi obungenabungozi, oko kulindeleke kakhulu kubo.
Ngoku, eyona nto iyothusayo kwaye iyothusa kakhulu, ivela kubantu abanjalo, kukuba baya kuhlala bekhetha ukuchitha ixesha kunye nawe, ixesha abanokuthi balisebenzise ukuqhubela phambili izicwangciso zabo zobungcali.
Xa oko kusenzeka, ungaqiniseka ukuba banomdla kakhulu kuwe, kwaye mhlawumbi baye bathathela ingqalelo ukuba uya kuba yinxalenye ebalulekileyo yobomi babo kungekudala.
Kanye ukusuka kokufika, indoda eyiVirgo ayinakuze ikuvumele ukuba ubaleke ngaphandle kokukubeka kwelona ziko lokuncina.
Lungiselela ezona ndawo zinomdla kwaye zandisiweyo zokuthumela imiyalezo kubomi bakho bonke. Uya kufuna ukwazi yonke into ngawe, kubandakanya neenkcukacha zabo bonke ubudlelwane bakho bangaphambili, ukuze nje abone ukuba ubuphosakele okanye hayi.
Bafuna ukugqibelela, ke ayothusi loo nto, kwaye akufuneki woyike, kuba ukuba ufikelele kweli nqanaba, kungenxa yokuba ucinga ukuba ufanelekile.
Kuya kulunga, ukuba nje ungaxoki kwindoda yeVirgo. Kananjalo aba bantu bazakuthetha njalo malunga nezinto ezinzulu kakhulu, kuba banobukrelekrele ngendlela emangalisayo.
Indlela yendoda yaseVirgo iyahlaziya, iyila izinto ezintsha, kwaye ikhethekile, ukuba uza kucinga ukuba awuyi kufumana omnye umntu onendalo nesisa njengaye. Ngokusisiseko, ufuna ukufumanisa ukuba yintoni kanye kanye eyenza ukuba uphawule, kumanqanaba entsonkothileyo, kunye nesizathu soko?
Kuba bafuna ukukunceda uziphuhlise, kuzo zonke iindawo zokujonga, kwaye ayisiyonto ininzi enokuyenza, okanye yazi ukuba ungayenza njani kwasekuqaleni. Ngapha koko, ayilulo uhlobo lwesintu, kwaye ke kuya kuba nezona zimvo zibalaseleyo nezona zivulekileyo zokuvavanya.
Lindela ezinye zezicatshulwa zakwindawo, njengeendlela zokucela umngeni kunye nokufumana iimpendulo zakho zangaphakathi.
Akufani nokuba amadoda eVirgo akanamdla wokuba nobambiswano nomntu abathandayo, kodwa endaweni yokuba bathathe ixesha elide ukukwazi, ngaphambi kokuya kwelinye inyathelo.
Kuya kufuneka ukuba wenze inyathelo lokuqala ubabuze, okanye ubuncinci ubonise umdla wakho.
Ukuba ayingabo abakwimigca engaphambili, baya kuziva bekhuselekile ngakumbi kwaye befumana isibindi, ukuze bavume kwangoko nangoko, ukuba kunjalo. Ngayiphi na imeko, uya kwazi ngoko nangoko ukuba baphindisela iimvakalelo zakho, kuba baya kukubonisa ukuba kwinqanaba ngalinye lendlela.
Kuba unqwenela ukuchitha bonke ubomi bakhe kunye nawe, uya kuhlala ekuxelela izinto ozenzayo ngokungalunganga, ukuze akuncede ube ngcono kwaye ube ngcono, umntu ophakame kakhulu kunangaphambili.
Ngokwenene luphawu lothando lwakhe olunzulu nolunzulu, ngaphezulu kobunzima bokugqwesa, kwaye ngenxa yokuba bethamba ngakumbi kunophawu oluqhelekileyo loMhlaba, ngekhe kube nzima ukumqinisekisa ukuba ancame olu tyekelo lwakhe.
Ukuba uyangqina kwindoda yaseVirgo ukuba sele uzazi, unoxanduva, uvuthiwe, kwaye unyamezele ngokwaneleyo ukuba ubone iimpazamo zakho kwaye uzilungise, aba bantu banokuthi bakuthathe kwilizwi lakho baphambuke.
Akuphosakalanga ukuthi baya kufuna ukukubamba ezingalweni zakhe ngalo lonke ixesha, kwaye ucinga ukuba bagqwesa kuhlalutyo kunye nokujonga, bayazi ukuba mabenze ntoni ukuze ukonwabele.
Ukuthetha ngokwengqondo, lo mthonyama uya kunomdla kwinto onokuyiphumeza xa unikezwe umxholo owaneleyo. Ukuba uyakwazi ukumenza iyelenqe, ke yile nto, uphumelele ukumenza owakho ngonaphakade.
Indoda yaseVirgo iyayazi indlela yokukuthanda, kwaye yenza oku ngendlela yayo, eyahlukileyo, ngokuba lapho xa uyifuna kakhulu, ngokubonisa uthando lwayo ngeendlela ezintsha nezilula.
Ungayihenda njani indoda eyiVirgo ukusuka ku-A kuye ku-Z
Uhlobo lokuDlala ngothando ngeVirgo: Impathic kunye neCharming
I-Mercury kwiCancer: Iimpawu zobuntu kunye nendlela ezichaphazela ngayo ubomi bakho
Ulwalamano lwe-aquarius man scorpio lomfazi
iingcebiso zesini kumfazi waselibra
umfazi we-sagittarius kunye ne-taurus umtshato womntu
indlela yokukholisa indoda ye-capricorn ngesondo
yintoni uphawu lwango-23 lwama-zodiac